September 2020 - Page4of 18 - Amawpyay
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက် (၅)ချက်
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက် (၅)ချက် လူတိုင်းက ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ဘဝကို လိုချင်ကြ သူတွေ ချည်းပါပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီး အတွက် စိတ်လုံခြုံမှုကို ပေးချင်ကြ ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မိသားစု ဘဝကို သက်ရောက် မှုတွေက အကောင်းဘက် ကထက် အဆိုးဘက် ကနေသာ ပိုများ လာပါ တယ်။ ဒါဆို အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးနေကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ အတွက် ပျော်ရွှင် ကျန်းမာတဲ့ မိသားစုကို ဘယ်လို တည်ဆောက် မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင် ပါတယ်။ (၁) အိမ်ပြန်လာသူကို ကြိုဆိုရာဝယ် ခင်ပွန်းပြန် လာတာကို ဇနီးက ဆီးကြိုတာဖြစ်စေ၊ …
ဂျိုင်းမွှေးတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းပါးပြီး ပြန်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ဂျိုင်းမွှေးတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းပါးပြီး ပြန်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ အကျီ င်္လက်ပြတ်လေးတွေ၊ ကြိုးတစ်လုံး အင်္ကျီလေးတွေ trend ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျိုင်းမွှေးတွေနဲ့မို့ မဝတ်ရဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးကြ မှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ Waxing တွေလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရိတ်ရိတ် ရက် အနည်းငယ်ကြာ တာနဲ့ အဲဒီ့ အမွှေးအမျှင်တွေက ပြန်ပေါက် လာတတ် တာပဲ မလား၊ ဒီလိုပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် ဂျိုင်းမွှေးတွေကို တစ်ဖြည်းဖြည်း ပါးပြီး ပြန်မပေါက် လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးကို ပျိုမေတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက် ပါ တယ်နော် ။ သံပုရိုရည်” သံပုရိုရည်က အမွှေးအမျှင်တွေ ကို ပါးလာ ရုံမက၊ …
“အားနာရတဲ့ ဒုက္ခ” တခါတလေ အားမနာစတမ်း ပြောတတ်တဲ့ လူတွေကို သိပ်အားကျ မိတယ် ရရင်ရတယ် မရရင် မရဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ရင် မဖြစ်နိုင်ဘူး ကြိုက်ရင် ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောတုန်းပဲ အမုန်းခံ ရတာ နောက်ဆက်တွဲ အမျှင်မတန်းဘူး အဲဒီတော့ နှစ်ဖက်စလုံး စိတ်ရှင်းတယ် အခု ခဏတာ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မရတာကို ရတယ် မဖြစ်နိုင် တာကိုဖြစ်နိုင် တယ် မကြိုက်တာကို ကြိုက်သလို သည်းခံနေ လိုက်တဲ့ အခါ နောက်ပိုင်းကျ ကိုယ်ပဲ အဆင်မပြေဖြစ် လာတာ အားနာ တတ်ပြီး ခပ်ပြတ်ပြတ် မပြောတတ်တဲ့ …
အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အနိုင်ယူတဲ့နည်း အတင်းတွေလား ပြောပါစေ အာညောင်းသွားရင် သူ့ဟာသူ တိတ်သွား လိမ့် မယ် ။ အတိုက်အခံတွေ လား သောင်းကျန်း ပါစေ လက်ပန်း ကျသွားရင် သူ့ဟာ သူရပ် သွားလိမ့်မယ် အပြိုင်အဆိုင်တွေ လား ပြိုင်ကြ ပါစေ ရှုံး သွားရင် သူ့ဟာသူ ဘေးရှောင် ထွက်သွား လိမ့်မယ် ။ အဆိုးမြင် သမားတွေ လား မြင်စမ်းပါစေ ပြောစရာ မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ဟာသူ ငြိမ်ကုတ် သွား လိမ့်မယ် ။ ကုန်းတိုက် သမားတွေ လား တိုက်စမ်း ပါစေ ပါးစပ် စမြုတ်ပြန် သွားရင် သူ့ဟာသူ့ …
အိပ်မောကျခါနီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုလို ဆတ်ခနဲဖြစ် သွားလေ့ ရှိတာ ဘာကြောင့်လဲ…?
အိပ်မောကျခါနီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုလို ဆတ်ခနဲဖြစ် သွားလေ့ ရှိတာ ဘာကြောင့်လဲ…? အိပ်မောကျခါနီး အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဆတ်ခနဲ၊ သိမ့်ခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ခံစားဖူးလား တကယ်တော့ ဒီလို ဖြစ်ရခြင်းက ကြွက်သားတွေ လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာချက်တွေက ဖော်ပြနေ ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းက အခုဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော် ။ အိပ်တစ်ဝက် နိုးတစ်ဝက် အခြေအနေ” လူတွေဟာ နိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဦးနှောက်က လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပြီး လူတွေရဲ့ နိုးကြားတဲ့ အသိစိတ်ကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ခု ကတော့ …
သင် ထားတာထက်တောင် ပိုပြီး ကြာရှည်ခံ ၊ အထားခံတဲ့ အစားအစာ (၉) မျိုး
သင် ထားတာထက်တောင် ပိုပြီး ကြာရှည်ခံ ၊ အထားခံတဲ့ အစားအစာ (၉) မျိုး ဘယ်ပစ္စည်း၊ အစား အ သောက် မှာ မဆို သူ့ ဟာ နဲ့ သူ expiry date ဆို တာ ရှိ တတ် ကြ ပါတယ် ။ အ စား အ သောက် တွေ မှာ တော့ ရက် လွန် ကုန်တာတွေ ၊ မလတ်တော့တာတွေ ၊ အချိန် ဘယ်လောက် ကြာရင် မစားသင့်တော့တာတွေ ပို ရှိတတ်ပါတယ် ။ ဥပမာ တစ်မနက်တည်း …
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ မိုက်တယ် ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ မိုက်တယ် ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန် တင်တာ သိန်း၈၀၀၀ တန်ကား လက်ဆောင်ပေး တဲ့ ယောက်ျားကို လိုချင်ရင် ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ​ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက် တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို မိဘ ကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေ wall မှာ လာလာ Tag ကြ …
ယောကျာ်းဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ တကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင် အတိတ်က အမှားတွေကို လက်ညှိးထိုး ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ရဘူး။ တကယ် ချစ်တယ် ဆိုရင် သူမှားနေရင်တောင်မှ လက်ခံ နားလည် ပေးရ မှာ ပဲ ။ ချစ်သူ/ရည်းစား ရယ်လို့ ဖြစ် လာပြီ ဆို ရင် တစ်ယောက် သိက္ခာကို တစ်ယောက်က ကာကွယ်ပေး ရ မယ် ။ အပုပ်မချ သင့်ဘူး။ လူတိုင်းဟာ အတ္တသမား ချည်းပဲ။ သူ့အတ္တကို ထိပါး လာတာ လူတိုင်း မကြိုက် ကြ ဘူး။ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ဒီအချက်က သိပ်အရေးကြီး တယ်။ ဆိုပါတော့… …